यूकेओएमको सुपरिवेक्षण अन्तर्गत ढिलाइ भएका बसहरू - RayHaber
घरटर्कीMarmara क्षेत्र41 कोजेलीढिलाइ भएका बसहरू युकेओएमको सुपरिवेक्षण अन्तर्गत
ukomun को अवलोकन मा ढिलाइ बसहरू
यातायात समन्वय केन्द्र (युकेओएम), कोवाली मेट्रोपोलिटन नगरपालिका विभाग भित्र स्थापना गरी यातायात र यातायात व्यवस्था को नवीनतम प्राविधिक उपकरण सहित पर्यवेक्षण र अनुगमन सिद्धान्त संग काम गर्दछ7/ 24। केन्द्रमा, जुन महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूमा राखिएको क्यामेराको साथ निरन्तर अनुगमन गरिन्छ, र नागरिकहरूबाट प्राप्त सूचनाहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया, यातायात मार्गहरूमा नकारात्मकता र फिर्ती समाधान उन्मुख र द्रुत हो।
प्रतिक्रियाहरूको जवाफ दिनुहोस्
सार्वजनिक यातायात नियन्त्रणमा राखिन्छ युकेओएम इकाई भित्रका कर्मचारीहरू द्वारा गरिएको निरीक्षण द्वारा। सहकारी अन्तर्गत सञ्चालन हुने बसहरूको बिहान प्रस्थान समय नियन्त्रण गर्ने यूकेओएम नियमित रूपमा आवश्यक सञ्चालनहरू गर्दछ र सवारी साधनहरू र दिनमा असफलताहरूको बारेमा चेतावनी दिन्छ। युकेओएम, जसले फिल्ड टोलीहरू र एक्सएनयूएमएक्स कल सेन्टरसँग समन्वयमा काम गर्दछ, सवारी साधनको निरन्तर अनुगमन गर्दछ, रुट नियन्त्रणहरू र रोकिन्छ र बाहिर निस्कन्छ, र सम्भावित उल्लlations्घनको तुरून्त जवाफ दिन्छ।
विकल्पहरू साँच्चिकै छन्
सेवाको गुणस्तर र नागरिकहरूको सन्तुष्टि बढाउन, युकेओएम द्वारा गरिएको नियन्त्रणहरू तत्काल इलेक्ट्रोनिक टोल स collection्कलन र सवारी साधन ट्र्याकिंग प्रणाली र सवारी साधनहरूमा क्यामेराद्वारा गरिन्छ। थप रूपमा, MOBESE क्यामेरा शहरको महत्वपूर्ण पोइन्टहरूमा अवस्थित साथ, यूकेओएमले यातायात घनत्व र समस्याहरूको निरीक्षण गर्दछ जुन यातायातमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ र आवश्यक भएमा तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
प्रशासनिक कार्यहरू लागू हुन्छन्
सार्वजनिक यातायात सवारी साधन, ट्याक्सी, सेवा मालिक र चालक जसले सार्वजनिक यातायात नियमन, सेवा सवारी नियमन, वाणिज्य ट्याक्सी नियमन जुन नागरिकहरूको गुनासोको विषय सम्बन्धी नियमहरूको दायरा भित्र उल्लंघन गरेको पाइन्छ; 1608 र 5326 को कानून बमोजिम प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाइन्छ।
इस्तांबुल रेल प्रणाली लगानी कार्यक्रम अनुसार ढिलो र कहिल्यै लाइनहरू सुरू गरे 16 / 04 / 2013 रेल प्रणालीको अनुसार इस्तांबुलको इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम विलम्बित र लाइनहरू कहिल्यै सुरू गरे। रेल प्रणाली इन्भेस्टमेन्ट कार्यक्रम ढिलाइ भएका लाइनहरू अनुसार: 57.46 किलोमीटर काडिको-कार्तल: (21.66 किमी) 2011 पनि समाप्त भयो। यो समय मा समाप्त छैन। Bagcilar-ओलम्पिक: (15.8 किलोमिटर) 2012 बीचमा अन्त्य हुनेछ। अझै पनि खुल्ला पर्खिरहेको छ। Skskdar-Çekmekyy: (20 किमी) 2013 समाप्त हुने योजना छ। रेल प्रणाली इन्भेस्टमेंट प्रोग्राम लाइन्सको अनुसार कि कहिल्यै सुरु हुँदैन: 51,5 किमी। Ataşehir-Monoray: (11 किमी)। 2012, र 2013 समाप्त हुनेछ। यो किन सुरु भयो। Besiktas-Giyimkent-Bağcılar: (24.5 किमी) 2012 बीचमा सुरु भयो, र 2015 को सुरुमा अन्त्य हुनेछ। बर्कर्कोय-बेल्लिडुजुउ (25 किमी) 2013 सुरु र 2015 पनि समाप्त भयो। बर्कर्कोया-बागर्सर: (9 किमी)। 2013 को सुरुमा सुरू गर्दै, 2014 एन
इजिप्टको लागि ढिलो ट्राम कति छ? 28 / 06 / 2017 "550 एक दिन पूरा हुनेछ" 634 दिनको अन्त भन्दा पहिले सेवामा राखिएको थियो। इजमिटको ट्राम 84 ले एक दिन ढिलाइ संग आफ्नो सेवा शुरु गर्यो। ट्रम ले अक्कराय वा कार्यहरू भनिन्छ तर यसमा धेरै काम छ। मार्गमा धेरै अपूर्ण प्रबन्धहरू छन्। स्थानमा कुनै स्टल स्थापना गरिएको छैन र धेरै अधिक कार्यहरू। त्यसैले तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि ट्राम व्यापार केही महिनाको लागि जारी रहनेछ। कोकाली मेट्रोपोलिटन नगरपालिकाको कुनै प्रमुख परियोजनाहरू समयमै समाप्त भएनन्। धेरै उदाहरणहरू दिइन्छ। ट्रामको कार्यलाई वहिल्यै समय समाप्त गर्न अपेक्षा गरिएको थिएन। अपेक्षा पनि ओलान थियो तर सबैभन्दा ठूलो भयो इजिप्ट र मार्गमा व्यापारीहरू। धेरै गाह्रो
उच्च गतिको रेलमा नयाँ विनियमन ... ढिलाइको फिर्तीमा टिकटको आधा मूल्य ... 19 / 09 / 2017 ट्राफिक, समुद्री काम र कम्युनिकेशंस मंत्रालय मस्यौदा चरणमा विनियमन संग नयाँ नियमहरू हुँदैछ। यात्रुहरूको यात्रामा नयाँ विकास हुँदैछ जसले रेलवेलाई मनपर्छ। मस्यौदाको चरणमा, सेवकाईले पहिले नै विभिन्न विचारहरू प्राप्त गर्न थालेको छ। विनियम ले पहिले देखि नै र यात्रा पछि संभव घटनाहरु संग अधिकार र दायित्वहरु को बाहिर सेट गर्दछ। यात्रुले परिस्थितिमा हात समात्न र पाहुनाहरू सक्षम गर्न सक्षम हुने छ र भोल्युमको लागी सजिलो हुनेछ। तथापि, सामानहरू र पाल्तुहरू जसले यात्रुलाई सताउन सक्छ। सामान यात्री को निरीक्षण को अंतर्गत जाँच गरिन सक्छ। टेलिकमको ह्याल्फ फिर्ता आउँनेछ जब ट्रेन अपरेटरले रेलमार्ग लगाए, BİL
सुन्दर इस्तांबुलको विलम्बित मेट्रो 10 / 10 / 2012 वर्ष 1967। म जन्म भएको मिति। केही मानिसहरूले हाम्रो इस्तांबुलको लागि योजना र योजना तैयार गरेका छन्। म यो एक अखबार कप्तानबाट सिक्दैछु। हाम्रो दैनिक जीवनमा, अनुसन्धान संग परेशान नभएसम्म यस्तो कुराको सामना गर्नाले तपाईंलाई पतित एक छ। त्यस समयमा सुरु गरेको मेट्रोको निर्माणलाई कल्पना गर्नुहोस्। आज उहाँ इस्तांबुलमा हुनुहुन्थ्यो, इस्तांबुल धेरै मेट्रो रेखाहरूसँग विश्वव्यापी हुनेछ। इस्तांबुल, जहाँ सम्झौता निश्चित स्थानहरूमा सीमित छ। अनुमानित आबादी 1.800.000 नजिक छ। त्यो समयमा यस्तो जनसंख्याको लागि मेट्रोलाई विचार गर्दै क्षितिज हो। किनभने मेट्रो, उत्पादनको धेरै मात्रामा कुन्नु
विलम्बित रेल नर्तर्क 11 / 01 / 2019 म्यूनिखमा बस्ने एक महिला महिला, रेलमा हरेक ढिलाइमा उनले स्कार्फको रङ रेकर्ड गरे। हामीमध्ये धेरैजना अङ्ग्रेजीहरू ए देखि बी सम्म पुग्ने यातायातको जन्मदिनको कमी जर्मनीको म्यूनिखमा मनाइ, एक महिलाले दुग्धमा ढिलाइको समयमा स्न्याफ बुनाई गरेर रोचक निष्कर्षमा पुग्यो। 40 मिनेटको अवधिमा, महिला, जो सामान्यतया सेवानिवृत्त भए, उनीहरूले मात्र स्टेशनमा ईश्वरीय बसोबास गर्नुपरेको थिएन, तर उनले जर्मन रेलवेको रिपोर्ट कार्ड पनि पाएनन्। बाढीले तीन रङहरू समावेश गर्दछ, प्रत्येक ढिलाइको लम्बाइ प्रतिनिधित्व गर्दछ। पाँच मिनेट ...
इस्तांबुल रेल प्रणाली लगानी कार्यक्रम अनुसार ढिलो र कहिल्यै लाइनहरू सुरू गरे
इजिप्टको लागि ढिलो ट्राम कति छ?
उच्च गतिको रेलमा नयाँ विनियमन ... ढिलाइको फिर्तीमा टिकटको आधा मूल्य ...
सुन्दर इस्तांबुलको विलम्बित मेट्रो
विलम्बित रेल नर्तर्क
अनुकारया टेलीफरिक बसेज आउँदैछ
पर्यावरण अनुकूल र सहज नयाँ बसहरू र केबल कार प्रणाली पूंजीमा आउँछन्
वीआईपी बसहरू माथिल्लो कक्षा IETT लाई आकर्षित गर्छ
गजल बसमा आउँदै गजल बसहरू
ओटोकार द्वारा उत्पादित बसहरू